Pikpọpu akụkụ | Igbu egbugbu
Pikpọpu úkwù n’úkwù na ya
Na Cerezo | 05/10/2021 09:55 | Emelitere ka 05/10/2021 10:04 | Pikpọpu akụkụ
Ị maara na ọ masịrị m ụdị egbugbu dị iche iche, yana mkpọpu na -eme mgbanwe.
Na -esote anyị ga -ekwu ogologo okwu banyere ndú ndị a, ọkachasị ka esi eme ha, ma ọ bụrụ na ha merụrụ ahụ, ma ọ bụ ihe egwu dị na ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime ụdị mmegharị ahụ a, anyị na -akwado ka ị gụọ akụkọ ọzọ gbasara microdermal, ajụjụ niile na azịza nke ihe nbanye a, usoro nwere njikọ chiri anya.
1 Ịgbapu úkwù
2 Clavicle ịkpọpu
3 Olee otu esi eme ha
3.1 Ngwa microdermal
3.2 Ịkpọpu elu
4 Ọ na-afụ ụfụ?
6 Ogologo oge ole ka ọ na -ewe iji gwọọ?
7 Ihe egwu dị na ya
Taa, a na m ewetara gị mmadụ abụọ n'ime ha, na -achọ ịmata ihe na na mụ onwe m ahụbeghị onye ọ bụla gbara m gburugburu na -enwu. Nke mbụ bụ ịpị ọkpọ ma ọ bụ ịpị ọkpọ, ọ bụghị ama ama ama ama, ọ naghịkwa abịaru nso na ewu ewu nke onye a rụrụ na otube, egbugbere ọnụ ma ọ bụ ntị.
N'agbanyeghị na ọ bụghị nke a ma ama, N'etiti ụmụ agbọghọ ọ na -enweta ama ama, yana maka ndị nwere afọ nwere agụụ, ọ na -aghọ sexy na ịkpọpu akụkụ dị iche iche.. Na mgbakwunye, ọ na -enye ohere ọtụtụ njikọta, ma ọ bụ n'ụdị ịkpọpu akụkụ naanị n'otu akụkụ hip ma ọ bụ ịkpọpu akụkụ abụọ n'akụkụ ọ bụla.
Ndupu ozo nke m choro isoro gi taa bu ịkpọpu n'okpuru clavicle, nke anaghị ewu ewu nke ukwuu, mana o doro anya na onye na -eyi ya na -enweta ọtụtụ nlele site n'aka ndị mmadụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị họrọla ịkpụpu akụkụ abụọ, otu n'akụkụ nke ọ bụla.
A na -eme akụkụ ahụ n'okpuru clavicle, yana ọgwụgwọ ya dịkwa mma, ọ bụ ezie na n'ụzọ ezi uche dị na ya ọ na -eweta nsogbu ma ọ bụrụ na anyị agwọghị ya nke ọma. Ọ ga -arịba ama na ọ bụrụ na arụpụtaghị mma ahụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ ọ bụrụ na cannula adịghị agbanwe agbanwe, anyị ga -agakwuru onye ọkachamara anyị ozugbo ka ọ chọta ngwọta.
Olee otu esi eme ha
Uzo esi eme ụdị ube a n'úkwù na clavicles dị nnọọ iche na ntupu nkịtị, ebe ọ bụ na ịnọ na mpaghara dị larịị, n'akụkụ ọkpụkpụ ma ọ bụ clavicle, enwere isi nbanye, mana ọbụghị nrụpụta imi ma ọ bụ ụdị ntị, dịka ọmụmaatụ. Enwere ụzọ dị iche iche iji mee mkpọpu a dabere ma ọ bụ ihe nrụnye microdermal ka ọ bụ ịkpọpu elu.
N'ihe banyere ịkpụpu microdermal, nke a na -etinye ọla ahụ n'otu ebe akpụkpọ ahụ, onye na-agbanwe ihe nwere ike iji agịga nkịtị, ebe ọ na-enwe oghere dị L nke ọ ga-etinye nkwado site na enyemaka nke ịwa ahụ, nke ga-enwe ụdị arịlịka nke akpụkpọ ahụ ga-ezo. Mgbe ahụ, a na -atụgharị ọla ahụ n'ime ihe njide ihe.
Ọzọkwa ọ ga -ekwe omume iji a ntụpọ dermal, ụdị ngwá ọrụ pụrụ iche, yiri nke onye na -egbutu kuki, nke a na -ewepụ akpụkpọ anụ gbara gburugburu iji debe ntụpu ahụ. N'ezie, nke a bụ usoro a na -ejikarị maka ụdị ịkpọpu akụkụ, ebe ọ bụ na ọ naghị egbu mgbu ma na -ahụkwa na ịkpọpu akụkụ ahụ adịghị emikpu n'ime akpụkpọ ahụ.
Mkpịsị ụkwụ dị elu ma ọ bụ ịpịkọta ọnụ na -abụkarị ọla nwere beads abụọ na mmanya. Dị ka ọ dị na mbụ, enwere ụzọ abụọ iji mee ya. Na nke mbụ, na -eji agịga, usoro ahụ adịchaghị iche na nsị ndị ọzọ na ebe ndị a na -ahụkarị, dị ka ntị: agịga na -aga n'ime akpụkpọ ahụ wee tinye ọla ahụ.
Usoro nke abụọ na -eji scalpel ime obere ịkpụ ebe a ga -amapuo ebe ahụ. Usoro a, n'agbanyeghị ihe ọ nwere ike iyi, adịghị emerụ ahụ ma na -enye ohere ọnya ahụ ịgwọ n'oge mbụ n'ọtụtụ oge, ọ bụ ya mere o ji ewu ewu.
Ọ na-afụ ụfụ?
Mgbu nke ịkpọpu akụkụ na -adabere n'ọtụtụ ihe, dị ka nguzogide gị na mgbu, agbanyeghị, ee, ịkpụpu n'úkwù na mkpịsị ụkwụ ka a na -ahụta ka ọ na -egbu mgbu, n'agbanyeghị na ngụgụ obi ka bụ na ọ bụ usoro ngwa ngwa. N'ime ụzọ niile anyị tụlere, a na -ekwu na nke kacha egbu mgbu bụ nke na -eji ntụpọ akpụkpọ anụ.
Ọ dabere n'ọmụmụ ihe ahụ, ịkpọpu njirimara ndị a nwere ike iru otu narị euro. Cheta na ọ bụghị ikpu ma ọ bụ igbu egbugbu bụ ihe ị nwere ike ịpụ ma ọ bụ nwaa ịchekwa.
Ogologo oge ole ka ọ na -ewe iji gwọọ?
Ọ dabere na ntụpu ị họọrọ, ọ ga -ewe obere oge ịgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ịkpụpu microdermal na -ewe ihe dịka ọnwa atọ ma nke elu nwere ike were site na ọkara otu afọ ruo otu afọ na ọkara. N'aka nke ọzọ, mpaghara hip dị ntakịrị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na ebe ịkpọpu ebe ịgwọ ọrịa na -ewe ogologo oge karịa ka a tụrụ anya ya, ebe enwere esemokwu.
Ihe egwu dị na ya
Ihe ize ndụ ndị metụtara ụdị ịkpọpu akụkụ a ha na -emetụtakarị mpaghara ebe ha nọ, n'ihe gbasara hip, dịka anyị kwuru na ngalaba ọgwụgwọ. Nsogbu nke ọnọdụ ahụ bụ na ọ bụ mpaghara nwere ọtụtụ ọnya (ya na uwe, akpa, uwe ime ...). Ọzọkwa, ịkpọpu akụkụ ahụ nwere ike ijide uwe wee bute anya mmiri. Ọ bụ maka ihe ndị a niile na ọ nwere ntakịrị ohere ibute ọrịa yana oge ọgwụgwọ ya dị ogologo karịa ndị ọzọ.
N'ihe banyere clavicle, n'agbanyeghị na esemokwu na -adị obereỌ bụghịkwa kpamkpam, ewezuga ya, ọ na -akpachapụkwa anya karịsịa mgbe ị na -eyiri ma ọ bụ yipụ otu uwe, dịka ọmụmaatụ, na -ebute ihe ize ndụ nke ịkpọpu ibute ọrịa.
Achọpụtakwara na ma úkwù na clavicle bụ ebe ọ na -adịkarị mfe ịkwagharị na -akwagharịYa bụ, ahụ na -ajụ ya wee si na mpaghara ahụ mere oghere ruo mgbe a ga -achụpụ ya n'ahụ. Ikekwe ọ bụ n'ihi na ọ bụ mmụba elu elu, ihe yiri ka ọ na -emetụta ohere ịjụ gị.
Enwere m olileanya na ị masịrị nhọrọ abụọ m, ha dị iche na nke ịpị ọkpọ. Ị nwere ịkpọpu akụkụ ọ bụla? Ị na -ahọrọ hip ma ọ bụ clavicle? Ma ị bụzi ndị na-akwado obere mkpọpu ihe ma ọ bụ ịkpụ ọkpọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Pikpọpu akụkụ » Pikpọpu úkwù n’úkwù na ya
Londonga London dijo
Enyemaka!! Enwetara m ịkpọpu akụkụ n'okpuru clavicle ọnwa ole na ole gara aga, ọ dịkwa mma ruo ugbu a na m kwụsịrị ilekọta ya, o nwere bọọlụ uhie na ọ na-afụ m ụfụ nke ukwuu, Amaghị m ihe m ga - eme
Ndewonu! Ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ ime ka ‘’ gwọọ ’’ mpaghara ahụ ka ị mere n’ụbọchị ndị mbụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ agbanwebeghị, gaa hụ dọkịta ọsọ ọsọ. I nwekwara ike iwere mgbochi mkpali iji hụ ma ọ bụrụ na ihe mgbu na mpaghara ahụ agbada. Echiche kacha mma!
Zaghachi Antonio Fdez
Biko nyere m aka, enwere m ịkpọpu akụkụ nri aka nri mana ọ naghị agafe ọkpụkpụ ma ọ bụ ihe ọ bụla naanị na anụ ahụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ịkpọpu akụkụ dịka nke a na-etinye n'ire, ihe dịka nke ahụ abụghị Microdermal ma ọ bụ ihe ọ bụla dị ka nke ahụ. mee ọnwa nke m nwere ịkpọpu akụkụ na akụkụ nke ịkpọpu.M pụtara, na nke ọ bụla obere ollito gburugburu ya ka na-acha uhie uhie ụdị ma ọ bụ ihe dị ka na m ga-eme ma ọ bụ ... nyere m aka 😭😭😭 .
Obere egbugbu aka ya mara mma
Sta akara na akụ, gbadoro anya na nka na ihe okike